Col Cali Gaab oo amar ku bixiyey in gaadiidka dowlada isticmaalaan Sumadda GD
Taliyaha ciidamada ilaalinta wadooyinka G/sare Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) ayaa ku amray shaqaalaha dowlada ee wada gaadiidka ay dowladu leedahay in ay isticmaalaan sumada ama taargada (GD) oo Gaadiidka Dowlada.
Col Cali Gaab ayaa warkan sheegay iyadoo ay ciidamada taraafikada ay wadaan howlgalo ay ku joojinayaan in wadooyinka magaalada Muqdisho ay maraan gaadiid aan wadan sumad iyo sidoo kale in qof kasta oo wada baabuur uu leeyahay warqada ruqsada ama Licence.
Gaadiid badan ayay ciidamada taraafikada soo qabteen kuwaas oo aan lahayn taargo amaba aysan darawalada wada qabin warqada ruqsada wadida gaadiidka.
Col Cali Gaab ayaa ugu baaqay shaqaalah adowlada inay isticmaalaan taarkada GD isagoo sheegay in ciidamada dowlada ay gacanta ku hayaan inta badan dalka isla markaana wax laga cabsadaa aysan jirin.
Taliyaha Ciidamada Taraafikada ayaa sheegay in shaqaalaha dowladdu aysan gaadiidkooda ku xirin taargada ay leeyihiin ee (GD), isagoo tilmaamay in marka ay qabtaan ay meel hoose kasoo saaraan.
Col Cali Gaab ayaa sidoo kale sheegay in xilligaan wixii ka dambeeya aysan ogolaan doonin in si sharci darro ah gaadiid loogu wato magaalada Muqdisho, isagoo tilmaamay in muddo sanad ah ay dadka warbaahinta kala hadlayeen.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya gaadiidka iyadoo maalin walba ay ka soo degaan dekada Muqdisho gaadiid faro badan. Waxaana wadooyinka Muqdisho laga dareemaya cariiri inta badan waqtiyada shaqada loo socdo ama laga soo rawaxo.
Ciidamo kawada tirsan Shabaab oo ku dagaalamay Baraawe
R/wasaare Saacid oo loogu baaqay inuu Is Casilo
QM:waan sii wadi doonaa taageerada Soomaaliya